Indlu yeholide (8 pers.) Eduze ne-Isaberg Mountain Resort - I-Airbnb
Indlu yeholide (8 pers.) Eduze ne-Isaberg Mountain Resort
Tranemo Ö, Västra Götalands län, i-Sweden
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Ellen
Indlu itholakala ekugcineni kwe-cul de sac edolobheni elincane i-Grimsås (cishe izakhamuzi ezingama-700), ngamakhilomitha angu-6 kuphela ukuya e-Isaberg Mountain Resort, lapho kukhona okuhlangenwe nakho kwawo wonke umuntu. Singabala ibhayisikili lezintaba, uhambo oluya phezulu kwesihlahla, ukuhamba ngomkhumbi, ichibi lokubhukuda, izinkundla zokudlala, ukushushuluza eqhweni ngewayini. I-Isaberg Golf Course iqhele ngamakhilomitha angu-8. Uhlala edolobheni, eduze nehlathi, lapho ungajabulela khona imvelo kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni. Nansi indawo eningi yemindeni emibili, noma imibhangqwana emithathu ethanda ukuhamba ndawonye.
Bona i-grimsashytten.dk ukuze uthole ulwazi olwengeziwe.
120 m2, indlu yamapulangwe eyakhiwa ngo-1991
Kukhona umbhede nesihlalo esiphezulu
Ayiqashisi emaqenjini entsha
Amanzi ashisayo nabandayo
Ikhishi elinezindawo zokudlela eziyi-8
2 amagumbi okugeza anethoyilethi neshawa
Igumbi lokulala elinombhede ophindwe kabili kanye nama-closets
Igumbi lokulala elinombhede owumbhede womndeni (indawo yokulala engu-3) + indawo yombhede wesivakashi nezingubo zokulala
Igumbi lokuhlala elinosofa nombhede (izindawo zokulala 1)
Isijobelelo esinombhede ongu-3/4. Isijobelelo sivulwa kuphela ngoMeyi kuya ku-Okthoba
I-inthanethi (yamahhala, engenantambo, umthamo olinganiselwe)
Isiqandisi: 80 L
Ithala elivulekile / elimboziwe
Isakhiwo / ingadi yemvelo: 1,100 m2
2 izindawo zokupaka
Inkundla yegalofu: 8.0 km
Inkundla yokudlala: 100 m
Ukuqashwa kwesikebhe: 7.0 km
Umzila omakiwe wokuqwala izintaba: 300 m
Ibanga eliseduze nendawo yokuhlala: 50 m
Ithuba lokudoba ibanga: 6.0 km
Ibanga lokuthenga: 6.0 km
Indawo yokudlela yebanga: 6.0 km
Ibanga eliseduze kwedolobha: 6.0 km/Hestra
Ibanga lamanzi: 1.5 km, ichibi.
High Chaparrel 36 km
Sicela uqaphele ukuthi zonke izinkomba zebanga ziyalinganiselwa futhi zikhonjiswe njengoba igwababa lindiza lisuka endaweni yamaholide.
Imibhede engu-3, Omatolasi abangu-1
Kunamathuba amaningi kulabo abafuna iholide elisebenzayo. Vakashela i-Isaberg Mountain Resort, thatha ibhayisikili lakho noma uhlole imvelo emabhuzuni akho okugibela izintaba, uma kuneqhwa, cishe kukhona. 3 km. imizila enqamula izwe enezibani.
I-Isaberg Golf Club inikezela ngezimbobo ezimbili ezinhle eziyi-18, usendleleni engaphakathi kwebhulokhi kanye nepaki lokuzijabulisa eliphefumulelwe entshonalanga i-High Chaparel ongafinyelela kuyo cishe. isigamu sehora. Uma uthanda ukukhululeka kwekhaya, ungahlala etafuleni lasekhishini nenkomishi yekhofi futhi ujabulele ukubona izilwane zasendle ezicebile ngaphandle kwefasitela. Uma unenhlanhla, ama-cranes nezinyamazane zizodlula.
Ingafinyelelwa ngocingo ubusuku nemini